The Incredibles2- YTV
Home » Daily Show » The Incredibles 2
Daily Show, International Movie, Programs September 7, 2020 12:20 am
? စူပါဟီးရိုးတွေဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် မရှိမဖြစ်အမြဲလိုအပ်နေမယ့်သူတွေများ ဖြစ်နေမလား…???
? စူပါဟီးရိုးတွေဟာ သူတို့ရဲ့အစွမ်းတွေအပေါ် လူတွေ ယုံကြည်မှုနည်းလာတာကြောင့် သာမန်ဘဝတွေလိုနေခဲ့ရာကနေ တစ်နေ့မှာတော့ စူပါဟီးရိုးတွေကို သဘောကျတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက စူပါဟီးရိုးတွေကို လူထုရဲ့အားပေးမှုပြန်ရမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုမှာပါဝင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်…………
? ဒါပေမယ့် ဒီအစီအစဉ်ဟာ မသင်္ကာဖွယ်ရာဖြစ်လာသလို စူပါဟီးရိုးတွေလည်း ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်. ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ မိဘတွေအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်စူပါဟီးရိုးလေးတွေက ဘယ်လိုကြိုးစားကယ်တင်ကြမလဲ… ???
?? သူတို့ရဲ့စူပါဟီးရိုးမျိုးရိုးဂုဏ်ကို စောင့်ထိန်းနိုင်ကြပါ့မလား…. ဆိုတာကိုတော့ “The Incredibles 2” မှာ အဖြေရှာကြည့်ကြရအောင်လား ပရိသတ်တို့ရေ…………..
? ပြသမည့်ရက် : ၇ – ၉ – ၂၀၂၀ (တနင်္လာ)
? ပြန်လည် ပြသမည့်ရက် : ၈ – ၉ – ၂၀၂၀ (အင်္ဂါ)